पुस्तकको रोयल्टी मन्दिरलाई- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
पुस्तकको रोयल्टी मन्दिरलाई
काठमाडौं — साहित्यकार तथा पत्रकार कमल रिजालले आफ्नो नयाँ उपन्यास ‘दृष्टिभ्रम’ को यस वर्ष प्राप्त भएको रोयल्टीबापत्को एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ गैंडाकोट, नवलपरासीस्थित मौलाकालीका मन्दिरलाई प्रदान गरेका छन् ।
साहित्यकार तथा पत्रकार कमल रिजाललेआफ्नो नयाँ उपन्यास ‘दृष्टिभ्रम’ को यस वर्ष प्राप्त भएको रोयल्टीबापत्को एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ गैंडाकोट, नवलपरासीस्थितमौलाकालीका मन्दिरलाई प्रदान गरेका छन् । लेखकले रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम पछि पनि क्रमश: सोही मन्दिरलाई नै प्रदान गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सृजना साहित्य प्रतिष्ठान गैंडाकोटद्वारा हालै आयोजित उक्त उपन्यासको परिसंवाद कार्यक्रममा लेखक रिजालले रकम मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शालिग्राम सापकोटालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । अध्यक्ष सापकोटाले सो रकमलाई मन्दिर परिसरमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यमा लगानी गरिने बाताए ।
सांग्रिला बुक्सद्वारा प्रकाशित ‘दृष्टिभ्रम’ बोक्सीप्रथाको विरोधमालेखिएको छ । परिसंवादमा डा. मतिप्रसाद ढकालले उपन्यास महिला हिंसाविरुद्धको बेजोड आवाज भएको टिप्पणी गरेका थिए । अर्का वक्ताडा. केशव चालिसेले उपन्यासले तन्त्रशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र एवं शरीर विज्ञान र मनोविज्ञानको आधारमा बोक्सीप्रथा उन्मूलन गर्ने प्रयासगरेको बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ ०८:३२
बैंकर्स संघद्वारा सम्मान कार्यक्रम
काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकका संस्थापक गभर्नर हिमालय शमशेर राणा सम्मानित भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैकर्स संघले राणालाई सम्मानित गरेको हो । ३१ औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा संघले राणालाई सम्मान गरेको हो ।
वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै राणालाई सम्मान गरिएको हो ।
राणा संस्थापक गभर्नरका साथै नेपालका पहिलो अर्थ सचिव पनि हुन् । उनी करिब ६ दशकदेखि कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । संघले गत वर्षदेखि वार्षिक रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने एकजनालाई सम्मान गर्दै आएको छ ।
साधारणसभाले संघको कार्यकारी सदस्यमा एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याललाई चयन गरेको छ । कार्यकारी सदस्यमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले उक्त पद छोडेका छन् । त्यही पदमा अर्याल निर्विरोध चुनिएका हुन् ।
संघले एक उपाध्यक्ष पद खारेज गरेको छ । यसअघि दुई उपाध्याक्ष रहने व्यवस्था थियो । यसअघि उपाध्यक्ष रहेका सिभिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन बैंकबाट बाहिरिएपछि उक्त पद खाली थियो । विधानअनुसार उक्त साधारणसभाबाट उक्त पद पूर्ति गर्नुपथ्र्यो । तर, खाली पदमा कसैको पनि उम्मेदवारी नआएपछि एक उपाध्यक्ष पद खारेज गरिएको संघले जनाएको छ ।
संघले हरेक वर्ष निर्वाचन गर्दै आएको छ । जसमध्ये एक वर्ष अध्यक्ष र अर्को वर्ष उपाध्यक्षसहित सदस्यहरूको निर्वाचन हुन्छ । गत वर्ष अध्यक्षको निर्वाचन भएकाले यो वर्ष उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको चुनाव गर्नुपर्ने थियो । विधानअनुसार एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाइँदैन । यसकारण कार्यकारी सदस्य दाहाल बाहिरिएका हुन् ।
संघमा निर्वाचित व्यक्ति सम्बन्धित बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा रहन्छ । अर्को बैंकमा गएको अवस्थामा उक्त पद छोड्नुपर्छ । हालका अध्यक्ष अनीलकेशरी शाह मेगा बैंकबाट चुनिएका हुन् । उनी आउँदो पुस १७ देखि सेन्चुरी कमर्सियल बैंकमा जाँदै छन् । शाहले मेगा छोडेपछि अध्यक्ष पद खाली हुनेछ । उक्त पद खाली भएपछि विशेष साधारणसभा बोलाइने र त्यहीँबाटै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिने संघले जनाएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ ०७:५६
फोटो काठमाडौंमा विभेदविरुद्धका प्रश्न
मदन पुरस्कार र जगदम्बा–श्री प्रदान
आधा दर्जन स्रष्टा सम्मानित
प्रथम महिला सीडीओ संस्मरण